DOS BOOTABLE USB FLASH MBANYE - WINDOWS - 2019
N'agbanyeghi na DOS abụghị usoro sistemụ anyị na-eji taa, ọ ka nwere ike dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ntụziaka BIOS melite na-ekwu na arụmọrụ niile kwesịrị ịrụ na os. Ya mere, tupu ịnye ntụziaka maka otu esi eme windo DOS na-agbagharị.
Lee kwa: Bootable USB Flash Draịvụ - ihe omume kacha mma ịmepụta.
Ịmepụta windo flash DOS na Rufus
Nhọrọ mbụ iji mepụta drive USB na DOS, bụ, n'echiche m, ihe kachasị mfe. Iji malite, ị ga-achọ ibudata usoro free nke na-enye gị ohere ịmepụta iche iche draịvụ mpempe akwụkwọ site na saịtị //rufus.akeo.ie/. Ihe omume ahụ anaghị achọ nkwụnye, ya mere ejikere maka iji ozugbo ozugbo nbudata. Gbaa Rufus ọsọ.
Na Ogige Ngwaọrụ, họrọ eriri flash USB ịchọrọ ịme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla. A ga-ehichapụ faịlụ niile site na windo a, kpachara anya.
Na mpaghara Njikwa System, dee FAT32.
Nwee akọrọ "Mepụta disk ejiji" jiri MS-DOS ma ọ bụ FreeDOS, dabere na ụdị mbipute nke DOS ịchọrọ ịgba ọsọ site na USB flash drive. Enweghị ọdịiche dị mkpa.
Ịkwesighi imetụ ndị fọdụrụ n'ubi ahụ, naanị ị nwere ike ịkọwa akara labeelu na "Ogwe olu olu", ma ọ bụrụ na enwere ọchịchọ.
Pịa "Malite". Usoro nke ịmepụta ụgbọala DOS flash ụgbọala nwere ike iburu ihe karịrị sekọnd ole na ole.
Nke a niile, ugbu a, ị nwere ike ịutọ site na USB USB site na ịmepụta bọtịnụ na ya na BIOS.
Otu esi eme ngwa ngwa ngwa DOS na WinToFlash
Ụzọ ọzọ dị mfe iji mezuo ihe mgbaru ọsọ a bụ iji usoro WinToFlash. Werenụ ya na http://wintoflash.com/home/ru/.
Usoro nke ịmepụta bọtịnụ DOS na-agba ọsọ na WinToFlash abụghị ihe siri ike karịa nke dị na mbụ ahụ akọwapụtara:
Họrọ taabụ "Advanced Mode"
Na "Task", họrọ "Mepụta ụgbọala na MS-DOS" wee pịa bọtịnụ "Mepụta"
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-akpali gị ịhọrọ eriri USB nke ịkwesịrị ịmepụta na, na ihe na-erughị nkeji, ị ga-enweta kọmputa USB iji bugharịa kọmputa gị na MS DOS.
Ọfọn, ụzọ ikpeazụ, n'ihi ihe ụfọdụ, ihe kachasị na saịtị ndị Russian. O doro anya na otu ntụziaka gafere. Ka o sina dị, n'ụzọ a maka m ịmepụta ngwa USB USB nwere ike ijide ngwa ngwa adịghị ka ọ dị mma.
N'okwu a, ị ga-ebudata ebe a archive: //files.fobosworld.ru/index.php?f=usb_and_dos.zip, nke nwere nchekwa na DOS sistemụ arụmọrụ n'onwe ya na usoro ihe omume maka ịkwadebe flash drive.
Gbaa Ngwá Ọrụ Nchekwa USB (faịlụ HPUSBFW.exe), kwupụta na a ga-emezi formatting na FAT32, ma kwanye na anyị bu n'obi ịmepụta ngwa USB flash na MS-DOS.
Na mpaghara kwekọrọ, kọwaa ụzọ nke faịlụ DOS OS (nchekwa nchekwa na archive). Gbaa usoro.
Iji ngwa mkpofu DOS na-agagharị
Enwere m ike iche na ị mere windo DOS na-ebugharị iji bido ya ma na-agba ụfọdụ usoro e mere maka DOS. N'okwu a, ana m akwado, tupu ịmalitegharịa kọmputa ahụ, detuo faịlụ mmemme ahụ n'otu iko kọmputa ahụ. Mgbe ị gagharịrị, wụnye bata site na USB na BIOS, esi akọwa ya n'ụzọ zuru ezu n'akwụkwọ ntuziaka: Bugharịa site na USB flash drive na BIOS. Mgbe ahụ, mgbe akpụkpọ ụkwụ kọmputa na DOS, iji malite usoro ihe omume ahụ, naanị ịkwesịrị ịkọwa ụzọ ya, dịka ọmụmaatụ: D: / program / program.exe.
O kwesiri iburu n'uche na ichota n'ime DOS na-acho ka achupu ihe ndi ahu ndi choro n 'ala di ala na ngwangwa komputa - na-egbuke BIOS na ibe ndi ozo. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite egwuregwu ochie ma ọ bụ mmemme nke na-amaliteghị na Windows, gbalịa iji DOSBOX - nke a bụ ngwọta kachasị mma.
Nke a bụ maka isiokwu a. Enwere m olileanya na ị dozie nsogbu gị.